Wantiicha filatamee gara rogadettii ykn tuutee rogadettii jijjira. Jijjiramtichii yoo tuutee rogaadotaa (fakkenyaaf, yemmuu wanta bareefamaa jijjirtuu)kan ummuu ta`ee, kana booda tokkoon tokkoon wantoota foilachuukettiin durattii tuuticha galchuuf F3 dhiibi.
Halqara Baafataa Wanta filatamee baniiti Jijjiri - Gara Rogaatti filadhu
Erga sarara ykn wanta barreeffamaa gara rogaattii gedarttee, haala baratammeen kana booda gulaaluun hin dandessuu. Ykn immoo akka rogaddee hundattii rogichas gulaalu dandeessa booca isaa sireessuuf ajajaa Gulaalii - Qabxiiwwan fayyadamuu dabalatee.
Title is: Gara Rogaattii